Iindaba -Nyusa amaxesha okuhlolwa kwabasebenzi abanxulumene nokubandayo
Yandisa uhlolo lokuhamba rhoqo kwabasebenzi abanxulumene nenkqubo yokubanda
Nge-9 kaDisemba, uZhejiang wabamba isithsaba sendyikitya yokuthintela inyumoniya kunye nolawulo kwinkomfa yemithombo yeendaba. Abantu abafanelekileyo abaphethe iOfisi yeQela eliPhambili lePhondo lezoThintelo noLawulo kunye ne-Ofisi yeProjekti yoLawulo lwePhondo bazise imeko yokuququzelela nokukhuthaza uthintelo lwesifo nokulawula nophuhliso loqoqosho nentlalo.
Intatheli ifunde kwinkomfa yabezindaba ukuba, ukuthintela ngokufanelekileyo ubungozi obufihliweyo "bokusasazeka komzimba ukusuka komnye umntu ukuya komnye", uZhejiang uza kuhlola uhlolo, ukulayishwa nokukothulwa, ukuthuthwa, ukugcinwa, ukwenziwa kunye nokuthengiswa kokutya okubandayo okungenisiweyo , ezinye iimpahla ezingeniswa elizweni, imithwalo yabakhweli engenayo kunye nezinye izinto. Njengabasebenzi abaphambili kuthintelo kunye nokulawula ubhubhane, abasebenzi ekulayisheni nasekukothuleni kunye nokunye ukunxibelelana ngokungqongqo baphumeze iimfuno zokhuselo, baqhubeke nokwenza esweni impilo yonke imihla, kwaye bandise ukuvavanywa rhoqo kwe-asidi ye-acid. Kwangelo xesha, yomeleza uvavanyo lwe-nucleic acid yamanqaku okungena kunye neengcali ezichaphazelekayo.Inani leesampulu zoogqirha, iisampulu zenqaku, kunye neesampulu zokusingqongileyo kuvavanywa kwisithili ngasinye (isixeko, isithili) veki nganye asizukuba ngaphantsi kwe-30.
Ingqungquthela yoonondaba yazisa ngendlela efanelekileyo yokuphathwa kokutya okubandayo okune-acidic-positive.
Nge-21: 00 ngokuhlwa kwe-2 kaDisemba, iisampulu zokubeka esweni imihla ngemihla zokutya okubandayo okuqokelelwe liZiko laseYuhuan lokuLawula nokuThintela kwiChengguan Central Vegetable Market kwafunyanwa isampulu yehagu yangasemva yomlenze wasemva engeniswe eBrazil evavanye intsholongwane. i-coronavirus nucleic acid entsha. Emva kokulandelwa yinkqubo ye "Zhejiang Cold Chain", iimveliso ezibandakanyekayo zangena kweli lizwe ngeShanghai Yangshan Port ngoSeptemba 28. Indawo yengingqi yakhawuleza yamkela amanyathelo kaxakeka njengokugcina imithwalo, ukuhlolwa kwabasebenzi kunye nokukhethelwa bucala, kunye nokupheliswa kwesiza, kwaye kwenziwa Uvavanyo lwe-nucleic acid kwindalo esingqongileyo kunye nabasebenzi abangaphandle kwemarike ngobusuku. Izithili ezifanelekileyo kunye neekhawunti zeSixeko saseTaizhou ezibandakanyeka ekuhanjisweni kwemveliso kwangoko zenze umthwalo kunye nokulandela umkhondo wabasebenzi, uphando kunye nokulahla. IOfisi yokuThintela nokuLawula yazisa amaphondo kunye nezixeko ezingabamelwane. Ngokwezibalo, iTaizhou City yaqokelela iisampulu ezili-174 zebhetshi enye yeemveliso, ukupakishwa kwangaphandle, kunye nemeko yangaphandle echaphazelekayo, kwaye abantu abangama-3304 ababandakanyekayo bachongwa. Iziphumo zovavanyo lwe-asidi ye-acid zonke zazingalunganga.
Nge-5 kaDisemba, iWuxi City, kwiPhondo laseJiangsu, yazisa inkampani ukuba upakisho lwangaphandle lwenyama yenkomo eqanduselweyo engafakwanga efakwe yinkampani kuvavanye intsholongwane ye-coronavirus entsha. UZhejiang uququzelele ngokukhawuleza i-Hangzhou, i-Ningbo, i-Huzhou, i-Jiaxing, i-Shaoxing, i-Zhoushan, i-Taizhou kunye nezinye iindawo ezisixhenxe ezichaphazelekayo kwi-batch efanayo yeemveliso ukwenza isampulu kunye nokuvavanywa okungxamisekileyo, ukubeka esweni impilo yabasebenzi kunye nokubulala iintsholongwane, kwaye zatywina iimveliso zokulahlwa okungenabungozi.Ukusukela nge-8 kaDisemba, iisampulu ezingama-4,975 zeemveliso ezinxulumene noko kunye nokupakishwa, imeko-bume yangaphandle kunye neengcali ziye zavavanywa kwaye zavavanywa, kwaye iziphumo zovavanyo lwe-nucleic acid zonke azibi.
Ukuze kuphuculwe indlela yolawulo oluvaliweyo lokungena kwamanye amazwe okutya okubandayo, uZhejiang wenze "ukusebenza okupheleleyo" kokutya okubanda ngaphakathi okungena kumazibuko eZhejiang okanye kungena eZhejiang kumazibuko eZhejiang ukuze kugcinwe, kwenziwe (ukwenza ikontraki), kunye neentengiso. Ukulawulwa, akukho okushiyekileyo ”ulawulo lwe-loop evaliweyo, icaciswe gca" ezine akufuneki ", ezizezi:
Abo bangenaso isiqinisekiso sokuhlolwa kunye nokuvunyelwa ukuvalelwa akuvumelekanga ukuba bathengiswe, abo bangenayo ingxelo yovavanyo lwe-nucleic abavunyelwe ukuba bathengiswe, abo bangenaso isatifikethi sokubulala iintsholongwane abavumelekanga ukuba bathengiswe, kwaye abo bangenakhowudi yemithombo yolandelelo Ukutya akuvunyelwanga ukuba kuthengiswe, kuncitshiswe ngempumelelo umngcipheko wobhubhane wokusasazeka kokutya okubandayo okungeniswa ngaphakathi.
Ukongeza, iZhejiang iya komeleza uthintelo kunye nolawulo lwentsholongwane entsha yesithsaba kwimpahla engeniswa elizweni kunye nabasebenzi abanxulumene noko. Ukujonga amatyala asekhaya akutshanje, kwindawo enobushushu obuphantsi ebusika, i-coronavirus entsha inokuthi isasazeke ngeenkqubo ezingalunganga zokubopha izinto, ezibeka phambili iimfuno ezintsha zomsebenzi wokhuselo lomzimba. Ukugxila ekuphuculeni ngakumbi "uhlolo lomthombo kunye nolawulo + bodwa bokugcina bodwa + ngendlela echanekileyo yolawulo olukrelekrele", iZhejiang iqulunqe izikhokelo zokuthintela kunye nokulawulwa kwamanqaku okungena kunye nabasebenzi abanxulumene noko. Phakathi kwazo, zonke izinto ezivela kwamanye amazwe ezithuthwa ziinqwelomoya zeenqwelo moya zamazwe aphesheya okanye ngamazibuko aya elizweni, ngaphandle kwempahla yorhwebo eninzi, zilumkiso kwaye zibulala iintsholongwane ngokugqibeleleyo kwiindlela zothutho kunye nokupakishwa kwangaphandle kweemveliso; umphezulu wangaphandle womthwalo ohloliweyo wabakhweli abangenayo ungeniswa kwibhanti yokuhambisa kwisikhululo seenqwelomoya Ngokomgaqo, ukubulala iintsholongwane ngokufanayo kuyafuneka ngaphambi kokukhutshwa. Umsebenzi wokubulala iintsholongwane ulandela imigaqo-nkqubo yokhuseleko, ukusebenza ngokukuko, kunye nokusebenza okufanelekileyo, okunganciphisi umngcipheko wentsholongwane entsha engeniswa ngaphandle kwempahla evela kwamanye amazwe, kodwa kunciphisa nonxibelelwano olungafunekiyo kunye neendleko.
Ngokomntu ofanelekileyo ophethe iOfisi yeQela eliPhambili lePhondo loThintelo noLawulo, uZhejiang akanayo ingxelo yengxelo eqinisekisiweyo yengingqi yeentsuku ezili-175 zilandelelana; Okwangoku zikhona iimeko ezi-4 eziqinisekisiweyo ezanyangwa esibhedlele, kwaye amatyala angama-27 osulelo olungalindelekanga asephantsi koqwalaselo lonyango, onke aphuma phesheya angena.
Ngenxa yokuvela kwamatyala manqaphanqapha kwisiXeko sase-Manzhouli se-Inner Mongolia Autonomous Region, iZhalai Nuoer District of Hulunbuir City, Pidu District kunye ne-Chenghua District of Chengdu City ye-Sichuan kwiPhondo, ngokweemfuno zendlela e-Zhejiang echanekileyo yokulawula indlela ekrelekrele, abo Ihlelwe njengomngcipheko omkhulu okanye umngcipheko ophakathi Abo beza eZhejiang kwaye babuyela eZhejiang besuka kuloo mmandla, ukuba abakwazi ukubonelela ngesatifikethi sokuvavanywa kwe-asidi ye-asidi kwiintsuku ezisi-7 ngaphambi kokufika kwindawo abaya kuyo, okanye "ikhowudi yezempilo" eluhlaza ikhowudi equlethe ulwazi, ziya kuthunyelwa kwindawo echongiweyo enje ngendawo ebanzi yenkonzo yokuvavanywa kwe-acid ye-acid; Isiphumo sinokungahambi ngokukhululekileyo nangocwangco phantsi komgangatho wobushushu obuqhelekileyo kunye nokhuseleko lomntu.
Ukongeza, xa ujonga imeko yobhubhane eKashgar, iXinjiang iphantsi kolawulo, kwaye iZhejiang incitshisiwe yabeka kwinqanaba lomngcipheko ophantsi kulo mmandla, akusafuneki ukuba abasebenzi bashiye iKalai neZhejiang babuyele eZhejiang babonelele. isatifikethi sokuvavanywa kwe-asidi ye-asidi. Kulabo babuyela eZhejiang bevela kwiSithili seDongjiang Port seTianjin City, iBinhai Area entsha kunye nePhai yaseNew Pudong, ethe yehliselwa kwimingcipheko ephantsi, isatifikethi sokuvavanywa kwe-acid ye-acid ayisafuneki.
Ukusukela oko kwaqhambuka lo bhubhane, uZhejiang ufumene ngokulandelelana abasebenzi abachaphazelekileyo kwintsholongwane evela kwiinqanawa zamanye amazwe ezilungiswe eHong Kong. Ukomeleza ukuthintela ubhubhane kule ntsimi yinxalenye ebalulekileyo yegalelo lokhuselo lwangaphandle. Ngokusekwe kwezona meko, amanxweme afanelekileyo aqulunqe amanyathelo okulawulwa kolawulo lokugcinwa kweenqanawa zamanye amazwe, kudityaniswe nophando olubanzi kunye nokugwetywa kweenqanawa zendlela, amazibuko e-berthing, iishifti zabasebenzi, njl., Kunye nokuchongwa komngcipheko ekujoliswe kuwo. Ngokuhambelana neemfuno "zohlolo olupheleleyo, ukuhlolwa kuqala, ukuhlolwa kuqala, ukuhlolwa kuqala, kunye nokulungiswa kokuqala", uvavanyo lwe-nucleic acid lwabasebenzi lugqunywe ngokupheleleyo ngaphambi kokuba inqanawa yamazwe onke ingene kumzi-mveliso ukuze ilungiswe; utshintsho lwabasebenzi aluvumelekanga phambi kokuba kukhutshwe iziphumo zovavanyo, kwaye ukulungiswa akuvumelekanga ukuba kusebenze. Kwangelo xesha, iinkampani zokulungisa iinqanawa ziyafuneka ukuba zenze inkqubo yokubhalisa nokubulala, kunye nemisebenzi yokulungisa inokwenziwa kuphela emva kokubulawa.